DHIIGNI QEERROO KAARDII UMMATA ITTIIN SOSSOBANII MITI! – Oromedia
Home » Yaada » DHIIGNI QEERROO KAARDII UMMATA ITTIIN SOSSOBANII MITI!
Lammii ofiif wareegama bifa kamiitu baasuun, kabajaa bara baraa nama goonfachiisa. wareegama gootoota keenyaatti ni boonna. ega gabrummaa jalatti kufnee kaafnee , wareegama ulfaataa baasaa jirra. Warra lubbuu isaanii bakka bu’aa hin qabnee lammii isaaniif kanneen dabarsanii kennan, bara baraan yaadachaa fi kabajaa kan laannuuf, gootummaa isaanitti waan boonnufi . saba ofiif wareegama kafaluun gootummaa fi ulfina bara baraa nama goonfachiisa. Warri wareegaman kabajaa bara baraa lammii isaanii biraa qabaachuu kan dhugeessu, har’allee kaayyoo isaan wareegamaniif, wareegamni ulfaataan kafalamaa jiraachuu isaatii .
Wareegamni Ulfinaa fi kabajaa ol-aanaa qabu kun, har’aa daa’immaniin osoo hin hafnee, dabalamaa jira. kun diinaaf rifaatuu ta’ee, tarkaanfii suukkanneessaatti ce’aa jiraachuu taajjabaa jirra. Wareegamni lammii ofiif taasifamu guyyuu dabalaa jira. Oromoon bakka jirutti wareegama barbaachisuu kafalee , Mirga Abbaa Biyyuummaa isaa kabachiisuuf murannoon falmaa gaggeessaa jira. Wareegamni har’aa gama hundaan kafalamaa jiru, galiiisaa akka ga’uuf, waan barbaachisu gumaachuun milkeessuutu furmaata. dhaloonni har’aa seenaa yoomillee hin dagatamee hojjachaa fi galmeesisaa jira. Dhaloota kabajaa fi Ulfinni bara baraa itti hanqatu. Dhaloota yoomillee OROMOOn gama hundaan itti boonuu danda’u.
Dhaloonni kun wareegama baasaa jiru kana kunuunsuuf, waan isaan barbaadan raawwachuun dubbii isa hangafaati. Wareegama dhaloota kanaan , Addunyaan dhimma Oromoof bakka laachaa fi furmaata isaaf gama hundaan yeroo itti hojjachaa jiraniidha. Haqa kana jallifnee eessallee ga’uu hin dandeenyu. Ilmaan OROMOO biyya keessaa dhumaa kan jiraniif, wareegama qaalii gama hundaan baasaa jirru firii itti gochuuf malee, dantaa fi Angoo kamiifu akka hin taanee ifadha. Dhiigii dhaloota har’aa fi Oromoo walii gala dhangala’aa jiru, akka kaardii filannoo wayyaanee ummata ittiin sossobuuf qabatanii fiiganii akka hin ta’iin eenyullee beeku qaba.
Har’a dhiigaa fi lafee ijoollee kanarraa dhabbannee mari’achuu ka qabnuu, kaayyoo isaan wareegamaniif akkamiin bakka ga’uu akka danda’uu, waan isaan eegalan kana itti fufsiisuuf maal godhamuu akka qabu irratti malee, dhiiga ijoollee kanaa akka kaardiitti fudhatanii Ummata ittiin gawwamsuuf mata duree adda addaa ummachuun gonkumaa ummata kaanaf yaaduu hin taatu. Ijoolleen OROMOO kichutti dhumaa kan jirtuuf, warri dantaa isaaniif arreedan maqaa araaraan akka wal unkuraniif miti. ijoolleen dhumaa kan jiraniif, sammuun beekumsaa fi ofittummaan joonja’ee Angoof jedhee akka wal gooluuf miti. Dhalli Oromoo Biyya keessaa kaayyoo ganamaaf wareegamaa kan jiruuf, wal ga’ii abbaan fedhee irratti arraba dheereffatuuf miti. Ilmaan OROMOO xiqqaa hanga maanguddootti sagalee tokkon wareegamaa ka jiruuf, waraqaa qormaataa ykn dorgommii xinxaltootummaa ykn Doktarummaa ykn Piroofesarummaa waliif mirkaneessuuf miti. kan isaan lubbuu isaanii qaalii itti amananii dabarsanii kennaa jiraniif, wareegama isaaniin Oromiyaa walboomsuuf qofaadha.
Wareegamni isaanii Abbaa argachuuf miti. Haadha Barbaachaafis miti. Abbaa fi Haadha isaanii waan beekaniif wareegamaafii jiru. wal ga’iin dantaa adda addaa irratti rarra’ee, akka waancaa kubbaa miilaa Biyyaa fi Magaalaalee irra naanna’uu furmaata hin fidu. Amalli habashummaa nama keessaa utaaltee bakka kudhan nama dhaabduu wareegama kafalamaa jiruutti kabajaa hin horu. Humni qabsaa’oota qabsoo kana hundeessanii fi cichanii falmaa gaggeessaa jiraniif kabajaa warri hin qabnee, dhaloota har’aaf kabajaa qabaataa jechuun gawwummaadhaa. Qaamni Abbaa jibbee mucaa jaalachuu yaaluu, dhugaa irratti hundaa’ee hin ta’uu. Siyaasi addunyaa keenyarraa arginuu, warra cichan irra warra jalaa maraatan sirbisiisanii akka wal galaafatan godhanii dantaa isaanii akka eegsifatan beekamaadha.
Warri kaleessa ABOn nama Ofitti hin butuu jedhan, har’aa waamicha godhamaa jiruu fi haalli jiru isaan dirqisiisaa jiru, wal ga’iin bakka kudhanitti waamaa jiran maal irraa madda ? deebiin kanaa qorannoo hin barbaachisu. Oromoon har’a waa tokkitti barbaada. Wareegama barbaachisu kafalee, Bilisummaa isaa goonfachuu malee, wal ga’ii ol aantummaa waliif ibsuu miti. kanneen diina irratti hojjachuu irra ABO irratti hojjachaa jirtan, mee waan ABO caaluu hojjadhaatii Ummata amansiisaa . yoo Xiqqaatee, dhala oromoo tokko jedhee qabsoof hiriirsee kabajaatii , waan gaarii isin jettan qabadhaati asi ba’aa !!! miidiyaan lallabuu fi arraba bareechuun gonkumaa qalbii Oromoo hin mootu. yeroon , yeroo hojiitii. Yeroo itti of mul’isanii mitii. Dhiignii Ilmaan OROMOO biyya keessatti dhangala’aa kaa jiru, kaardii Ummata ittin gawwamsitanii mitii kan jennuf kanaafii !!!
Dhiigni ijoollee keenyaa, Xabala mana namaa irra naanna’uu miti. Dhiigni obbolaa keenyaa, waancaa Hiddaasee Giddibii gandarra naanna’aa jiru miti. Dhiigni abbootii fi haadholii keenyaa, chaampiyoonsi liigii biyyarra naanna’ee furmaata argatuu miti. Yoo qalbii fi beekumsa qabaattan, beekumsii fi qalbiin Ummata ofiif maal akka argamsiisuu biyyuma jirtanirraa baradhaa.
Previous: Kabajaa Oromoo Kan Deebisu, Hojii Qabsoo Jabeessuu dha
Next: Seenaa Artist Usmaayoo Muusaa (1967-2006)